Khudbadii marwo Caasha Geelle Diriye, wasiirka haweenka & horumarinta qoyska ee sannadguurada 12-aad ee aasaaska dawlada Puntland. – Radio Daljir
Khudbadii marwo Caasha Geelle Diriye, wasiirka haweenka & horumarinta qoyska ee sannadguurada 12-aad ee aasaaska dawlada Puntland.
Garowe, Aug 01 – 1-da Ogosto waa maalinta dawlada Puntland. Waxaa ka socda gobollada Puntland & dalalka kale ee caalamka ee ay ku nool yihiin qurbajoogta Puntland, munaasabado lagu xusayo aasaaska Puntland. Garowe, Bossaso, Galkacyo, Buuhoodle, Qardho, Badhan & Galdogob ayaa ka mid ay magaalooyinka laga xusayo sannadguurada 12-aad ee Puntland.